Xage ka kacsadan dumarku? | Gaaloos.com
Home » galmada » Xage ka kacsadan dumarku?
Xage ka kacsadan dumarku?
Sedexdaan Arin Lamaantaada Waa Ay Ka Careysiinayaan Ee Iska Ilaali
* Waligaa Lamaantaada Haka Qarin Dareemahaaga : kaliya waxaad ogaataa in haweeneyda jeceshahay in ninkeeda ka qeyb galiyo dhamaan dareemihiisa wax waliba oo ku taagan farxad iyo murago in ay la qaadato ayay diyaar u tahay. hoos riix
Title: Xage ka kacsadan dumarku?